Satashikhabar.com शेयर बजारमा युवा पुस्ताको बढदो आकर्षण - satashikhabar.com
७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १८:२०
सतासी खबर पत्रिका /झिलझिले, झापा पछिल्ला केही समय युवा पुस्ता देखि सबै वर्गका मानिसहरुमा शेयर शब्दले निकै नै लोकप्रियता र बढदो आकर्षण बटुलीरहेको देख्न सकिन्छ । यसै बीच सर्वसाधारण देखि बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व विद्यार्थी, कर्मचारी आदिको माग बमोजिम शेयर बजार बारे तथ्य, भ्रम र अन्यौलता माथि प्रकाश पारिदिन विगत ८ वर्षदेखि शेयर बजार क्षेत्रको राम्रो अनुभव बोकेका संस्कार मन्टेश्वरी अंग्रेजी विद्यालयका युवा प्रिन्सिपल आशिष बस्नेत सँग सतासी खबर पत्रिकाका सम्वावदाता पवन राईले गरेको अन्तवार्ता : –
आशिष सर अहिले कस्तो हुनुहुन्छ ?
​सकुशल छु । कोरोनाको महामारीबाट जोगिनको लागि सावधानी अपनाइ रहेको छु ।
​अहिलेको कोरोनाको महामारीको विषम परिस्थितीमा र विद्यालय पनि बन्द रहेको ​अवस्थामा के गर्दैहुनुहुन्छ?
हाल विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द भन्दा पनि अनलाईन माध्यमबाट कक्षाहरु सञ्चालन ​भईरहेको अवस्था छ र अन्य समयमा भने म शेयर बजारतिर नै समय दिइराखेको हुन्छु ।
अहिले सबैतिर यो शेयर शब्द धेरै नै सुनिन्छ । खासमा यो शेयर भनेको के हो अलि ​स्पष्ट पारिदिनुस न ?
​कुनै पनि पब्लिक कम्पनी चलाउनको लागि पैसा अर्थात पूँजीको आवश्कता हुन्छ । सो ​आवश्कता पूरा गर्न कम्पनीले विभिन्न माध्यमबाट पूजी संकलन गर्न सक्छ । जस्तै ​ऋणपत्र मार्पmत ऋण लिएर अथवा शेयर जारी गरेर पूँजी जम्मा गर्ने गर्दछ । छोटकरीमा ​भन्नुपर्दा शेयर भन्नाले पूँजीको ईकाई हो ।
संस्कार मन्टेश्वरी अंग्रेजी विद्यालयका प्रिन्सिपल आशिष बस्नेत
​शेयर बजार भन्नाले चै के बुझिन्छ ?
​छोटकरीमा भन्नु पर्दा शेयर बजार भन्नाले यस्तो बजार हो जहाँ लगानीकर्ताले सजिलै ​कुनै पनि नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छ । शेयर बजार बाट ​सहजै कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण तथा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।
शेयर बजारको प्रकार बारे बुझाईदिनुस न ?
शेयर बजारलाई २ भागमा अर्थात प्राथमिक (PRIMARY) र दोश्रो (SECONDARY)बजार ​मा वर्गीकरण गरिन्छ । प्राथमिक बजार भन्नाले कम्पनीले शुरुवातमा पूँजी चाहिदा शेयर ​मार्फत पूँजी संकलन गर्दछ, जस्तो हालसालै विभिन्न कम्पनीहरुले १०० रुपैया गोटाको ​शेयर (IPO)भर्नेको लहर चलेको सुन्नुभाको छ त्यसैलाई प्राथमिक शेयर भनिन्छ र त्यहि ​शेयरको बाँडफाट पश्चात नेप्सेमा सूचीकृत भई दोश्रो बजार (SECONDARY MARKET) मा ​यसको किनबेच गरिन्छ ।
धितोपत्र बोर्ड (NEPSE) को स्थापना कहिले भयो ?
​शेयर खरिदबिक्री उदेश्यले २०५० साल जेष्ठ २५ गते देखि नियामक निकाय धितोपत्र ​बोर्ड (NEPSE) स्थापना गरी दोश्रो बजार सञ्चालन हुदै आएको छ ।
शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ ?
​यसमा प्रवेश गर्नको लागि सर्वप्रथम हितग्राही(DEMAT) खाता खोल्नु पर्दछ । यसका ​लागि कुनै पनि वाणिज्य बैंक अथवा ब्रोकर अफिसमा गएर हितग्राही खाता (DEMAT) ​खोले पश्चात ब्रोकरको माध्यम बाट शेयर किनबेच गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो क्षेत्रमा बोकर अफिस कहाँ छ ?
हाल नेपालमा ५० वटा ब्रोकर अफिसहरु सञ्चालनमा छन् । पहिले काठमाण्डौँमा मात्र ​केन्द्रित अफिसहरु अहिले भने बिराटनगर, चितवन, पोखरा लगायत झापाको ​बिर्तामोडमा श्री हरि सेक्युरिटिज, सेक्युरड आदिको शाखाहरु सञ्चालनमा आएका छन् ।
​एकदमै लोकप्रिय बन्दै गईरहेको(IPO) मा आकर्षण बढ्नुको कारण के होला ?
​दुई, चार वर्ष अघि एक डेढ लाख मात्र (DEMAT)खाता सञ्चालनमा थियो । अहिले (DEMAT) खोल्नेको संख्या २० लाख पुगेको छ । LOCKDOWN अवधिभर सम्पूर्ण ​व्यवसाय ठप्प हुँदा लगानीको अरु विकल्प थिएन र शेयर बजारमा सक्रिय करिब २, ३ ​लाख लगानीकर्ताले आफन्तजन, चिनजानका साथीभाई आदिलाई शेयरबारे जानकारी ​गराई खाता खोलाउदा यसको लोकप्रियता बढदै छ । साथै प्राविधिक विकासको कारणले ​अनलाइन बाटै शेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले र (IPO) मा शेयर परे ​नाफा सुनिश्चि भएकोले यसको लोकप्रियता बढदै गएको छ । भर्खरै पनि करिब नौ ​लाखले (IPO) भरे जुन माग भन्दा अत्यधिक बढी थियो ।
​माग भन्दा बढी आवेदन आयो भन्नु भयो यसले गर्दा (IPO) नपर्ने सम्भावना रहयो हैन ​र !
​पक्कै पनि १ तर यसरी शेयरबारे आकर्षण र जानकारी बढनु दिर्घकालीन रुपमा देशको ​अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुने कुरा हो । यसरी (IPO) नपर्ने कुराले भने लगानीकर्तालाई केही ​हतोत्साही गर्न सक्छ, त्यसका लागि धितोपत्र बोर्ड (NEPSE) ले बुकबिल्डिङ्ग अवधारणा ​ल्याउने योजना बुन्दैछ ।
​शेयरबजारलाई जुवाघर मान्ने बेग्लै भिड पनि छन नि !
​पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसलाई जुवाघरको संज्ञा दिए, त्यसै गरी युवराज ​खतिवडाले अनुपादक क्षेत्र भने तर पछि बोली सुधार गरे पछि भने शेयरबजारमा ​लगानीकर्ता प्रेरित भए । कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यसको वार्षिक प्रतिवेदन, प्रतिफलको ​सम्भावना, लाभांशको इतिहास र अन्य आधारभूत तथा प्राविधिक मूल्याकंन गरेर लगानी ​गर्दा लगानी खेर जादैन । तर नेपालमा भने हल्लाको भरमा चल्ने, कम्पनीको मूल्याकंन ​नगरी चाँडो कमाउने लोभमा लगानी गर्दा लगानी डुब्न सक्छ । त्यसले यसलाई कसैले ​जुवाघरको संज्ञा पनि दिने गरेको पाइन्छ ।
अन्त्यमा नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
​हाल विश्वमा धेरै मानिसहरुले शेयरबजारलाई नै आफ्नो मुख्य व्यवसाय मानी भविष्य ​खोज्ने र बनाउने क्रम जारी छ । शेयरबजार बाटै संसारकै चौथो धनी बन्न सफल ​भएका वारेन वफेट, भारतका खर्बपति राकेश झुनझुनवाला, नेपालका निर्मल प्रधान ​जस्ता प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । शेयरबजार सम्बन्धी जानकारीको लागि मेरो लगानी ​डट कम, शेयर संसार डट कम जस्ता साइटहरु फलो गर्नसक्छन । अन्त्यमा सम्पूर्ण ​नेपालीहरुमा बडा दशैं, दिपावली ​तथा छडपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त ​गर्न चाहन्छु ।